Indlela yokuprinta iincwadi zomsebenzi kwi-Excel 2019
Emva kokuba wenze i-spreadsheet kwi-Excel 2019, ungayiprinta ukuze abanye babone. Xa uprinta amaspredishithi, kuya kufuneka ukhathalele ngokukodwa indlela i-Excel ebonakala ngayo kwiphepha kuba ispredishithi esikhulu sinokuprinta kumaphepha amabini okanye nangaphezulu.
Oku kunokubangela iingxaki ukuba ispredishithi esipheleleyo se-Excel siprinta kwiphepha elinye kodwa uluhlu lwamanani olunye luyavela kwiphepha lesibini, elinokwenza ukufunda nokuqonda idatha yespredishithi yakho iphazamise. Xa uprinta ispredishithi, thatha ixesha ukulungelelanisa idatha yakho ukuze iprinte ngokuchanekileyo kwiphepha ngalinye.
Sebenzisa umbono woBeko lwePhepha kwi-Excel 2019
I-Excel ingabonisa i-spreadsheet zakho ngeendlela ezintathu: umbono oQhelekileyo, ukuHlolwa kwePhepha lokuKhangela, kunye nokuBonwa kwePhepha. Umbono oqhelekileyo yimbonakalo emiselweyo, egcwalisa nje isikrini sakho ngemigca kunye neekholamu ukuze ubone ispredishithi sakho kangangoko kunokwenzeka.
Uqhekeko lwephepha lokuqala libonisa imida yephepha ngalinye ukuze wazi ukuba iphepha ngalinye liza kubonisa ntoni ukuba uyaliprinta.
Ukujonga ubeko lwekhasi kubonisa ispredishithi ngokuchanekileyo njengoko siza kubonakala xa usiprinta. Awunokubona kuphela apho iphepha lakho lekhefu lenzeka khona kodwa ukongeza iintloko ngaphezulu kwespredishithi sakho.
Cofa kwiTebhu yokujonga.
Cofa kwindawo yesiQinisekiso, yokuQhekeka kwePhepha, okanye icon yokuYilwa kwePhepha kwiqela leMisebenzi yokuBonwa kweNcwadi.
Umbono woBeko lwePhepha ubonakalisa ngokucacileyo apho ikhefu lephepha lenzeka khona emazantsi kunye nasemacaleni espredishithi sakho.
Unokuklikha kwakhona iifayile eziqhelekileyo kunye neZakhiwo zePhepha kwikhoneni elingezantsi lasekunene kwiWindows window.
usulelo lwe-amoxicillin 500mg yesono
Ungasilayida isilayida esiphakamisayo kwikona esezantsi ekunene ukusondeza ngaphakathi okanye ngaphandle ukuze ubone iinkcukacha zespredishithi ngaphezulu okanye ngaphantsi, ngokwahlukeneyo.
Ukongeza i-header okanye i-footer
Iintloko kunye neenyawo ziluncedo xa uprinta ispredishithi sakho. Isihloko sinokuchaza ulwazi kwispredishithi, njenge Ulwazi lweRhafu yokuBuyisa ye2021, kunye nephepha elingasezantsi linokubonisa amanani ephepha. Ukwenza i-header okanye i-footer, landela la manyathelo:
Cofa Faka ithebhu.
Cofa kwi icon yombhalo.
Imenyu ibonakala ngezantsi komfanekiso wokubhaliweyo.
Cofa kwi icon yeNtloko kunye neenyawo.
I-Excel ibonisa ithebhu yoyilo kwaye yenza ibhokisi yokubhaliweyo yentloko kunye neenyawo.
Ithebhu yoyilo ibonelela ngezixhobo zokwenza i-header okanye i-footer.
I-doxycycline mono kunye notywala
Chwetheza isicatshulwa sakho sokubhaliweyo kwibhokisi yokubhaliweyo okuphezulu.
Cofa indawo yiya kwi Footer icon kwiqela lokuKhangela.
I-Excel ibonisa ibhokisi yokubhaliweyo okuphezulu.
Chwetheza umbhalo wakho wokubhaliweyo osezantsi ephepheni kwibhokisi yokubhaliweyo yeenyawo.
Ukuba utshintshela kumbono woBeko lwePhepha, unokucofa ngqo kwintloko okanye kwibhokisi yonyawo phezulu okanye ezantsi ephepheni uze uchwetheze isicatshulwa sakho.
Ukushicilela iigridi kwi-Excel 2019
Imigca yegridi ivela kwiscreen ukukunceda ulungelelanise idatha kwimiqolo nakwiikholamu. Nangona kunjalo, xa uprinta iphepha lakho lokusebenzela, unokukhetha ukushiya imigca yegridi okanye ukuyiprinta ukwenza idatha yakho iqondakale lula.
Ukuprinta imigca yegridi okanye umqolo kunye nezihloko zekholamu, okanye zombini, landela la manyathelo:
Cofa indawo ethi Ubeko lwekhasi.
Ukuprinta imigca yegridi, khetha ibhokisi yokuPrinta yokujonga phantsi kodidi lweeGridi.
Ukuprinta imiqolo kunye nezihloko zekholamu, khetha ibhokisi yokuKhangela yokuPrinta phantsi koluhlu lwesihloko.
Ukuchaza indawo yokuprinta kwi-Excel 2019
Ngamanye amaxesha unokufuna ukuprinta hayi ispredishithi sakho siphela kodwa yinxalenye ethile yaso, ebizwa ngokuba indawo yokuprinta. Ukuchaza indawo eprintwayo, landela la manyathelo:
Khetha iiseli ofuna ukuziprinta.
Cofa indawo yoPrinta kwiQela lokuCwangcisa iphepha.
Imenyu yokudonsa ibonakala.
Khetha indawo yokuPrinta.
I-Excel ibonisa umgca ojikeleze indawo yakho yokuprinta.
Cofa kwiTebhu yefayile uze uklikhawule Printa.
Umzobo wokuprinta kwangaphambili wendawo yakho oyikhethileyo yokuprinta iyavela.
Imenyu yeNgingqi yokuPrinta ikuvumela ukuba uchaze okanye ucofe iiseli ezinokuprintwa.
Emva kokuchaza indawo yokuprinta, ungabona ukuba zeziphi iiseli eziyinxalenye yendawo yakho yokuprinta ngokunqakraza utolo olukhombe ezantsi lwegama leGama kwaye ukhethe iPrinta_Area.
Emva kokuchaza indawo yokuprinta, ungasoloko ukongeza kuyo ngokulandela la manyathelo:
Khetha iiseli ezikufutshane nendawo yokuprinta.
alv 196 ipilisi yesangqa eluhlaza okwesibhakabhaka
I-Excel ibonisa umgca ojikeleze indawo yakho yokuprinta esandula kuchazwa.
Emva kokuchaza indawo yokuprinta, ungasusa ngokulandela la manyathelo:
Cofa indawo yokuPrinta.
Khetha indawo yokuPrinta ecacileyo.
Ukufaka kunye nokususa ikhefu lephepha kwi-Excel 2019
Ingxaki enye kwiipredishithi ezinkulu kukuba xa uziprinta, iinxalenye zinokunqunyulwa xa ziprintwe kumaphepha ahlukeneyo. Ukulungisa le ngxaki, ungaxelela i-Excel ngokuthe ngqo apho kufaneleke khona ukwaphuka kwamaphepha.
Ukufaka ikhefu lephepha, landela la manyathelo:
Ngaba pedialyte ilungele abantu abadala
Hambisa isikhombisi kwiseli echaza apho kufaneleka khona iphepha elimi nkqo nelithe tye.
Cofa i icon yoqhekezo kwiqela lokuseta iphepha.
Khetha Faka ukuQhekeka kwephepha.
I-Excel ifaka iphepha elithe tyaba ngqo ngaphezulu kweseli oyikhethileyo kwiNyathelo 1, kunye nokuqhekeka kwephepha elithe nkqo ngasekhohlo kwelo seli.
Imenyu yoBreak ikuvumela ukuba ufake ikhefu lephepha.
Ukususa ikhefu lephepha, landela la manyathelo:
Khetha enye yezi zilandelayo:
Ukususa ikhefu lephepha elithe tye, cofa kuyo nayiphi na iseli ebonakala ngokuthe ngqo ezantsi kwekhefu lephepha elithe tyaba.
Ukususa ikhefu lephepha elithe nkqo, cofa nakwisiphi iseli esibonakala ngqo ngasekunene kwesiqhekeza sephepha esithe tyaba.
Ukususa zombini ikhefu lephepha elithe nkqo nelithe tye, cofa kwiseli ebonakala ekunene kwekhefu lephepha elithe nkqo kwaye ngokuthe ngqo ezantsi kwekhefu lephepha elithe tyaba.
Khetha Susa ukuQhekeka kwephepha.
I-Excel isusa ikhefu lephepha olikhethileyo.
Uluhlu lokuprinta kunye nezihloko zekholamu kwi-Excel 2019
Ukuba unespredishithi esikhulu esigcwalisa amaphepha amabini okanye nangaphezulu, i-Excel inokuprinta idatha yakho yespredishithi kumaphepha ahlukeneyo. Nangona iphepha lokuqala linokuprinta iilebheli zakho ukuchonga ukuba yeyiphi umqolo kunye nekholamu enokuthi imele, nawaphi na amaphepha ongezelelweyo anokuprintwa yi-Excel awayi kuthwala iilebhile ezifanayo ezichazayo. Ngenxa yoko, ungavala imigca yokuprinta kunye neekholamu zamanani ngaphandle kweelebhile ezichonga ukuba athetha ntoni loo manani.
Ukulungisa le ngxaki, unokuchaza iilebheli zokuprinta kwiphepha ngalinye ngokulandela la manyathelo:
Cofa i icon yokuPrinta izihloko kwiqela lokuseta iphepha.
Ibhokisi yencoko yababini yokuCwangcisa iphepha iyavela.
Ngakwesokudla seMigca yokuPhinda kwiBhokisi ephezulu yombhalo, nqakraza Ukuwa / Ukwandisa utolo.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yokuCwangciswa kwephepha iyancipha.
Cofa kumqolo oqulathe iilebhile ofuna ukuziprinta ngaphezulu kwiphepha ngalinye.
Cofa i-Collapse / Yandisa utolo kwakhona.
Ibhokisi yencoko yababini yokuSeta iphepha iyavela kwakhona.
Ngakwesokunene seKholamu yokuPhinda kwibhokisi yokubhaliweyo yasekhohlo, cofa i-Collapse / Expand arrow.
Cofa kwikholam equlathe iilebheli ofuna ukuziprinta ngasekhohlo kwiphepha ngalinye.
Ibhokisi yencoko yababini yokuCwangcisa iphepha ikuvumela ukuba uchaze umqolo kunye nezihloko zekholamu zokuprinta kwiphepha ngalinye.
wenza ntoni i-ketamine
Ukuchaza imida yokuprinta kwi-Excel 2019
Ukukunceda ukuba ucofe okanye wandise ispredishithi sakho ukugcwalisa iphepha eliprintiweyo, unokuchaza imida eyahlukeneyo kwiphepha ngalinye eliprintiweyo. Ukuchaza imida, landela la manyathelo:
Cofa i icon yeMargins kwiqela lokuseta iphepha.
Khetha isitayile somda wephepha ofuna ukusisebenzisa.
Uluhlu lwee-Margins lubonisa uluhlu oluchazwe kwangaphambili onokulukhetha.
Ukuba ukhetha iiMargants zesiko kwiNyathelo 3, ungachaza imida yakho kwiphepha eliprintiweyo.
Ukuchaza ubume bephepha kunye nobungakanani kwi-Excel 2019
Ukuqhelaniswa kwephepha inokuba yiyo Imo yokuma komhlaba (ububanzi bephepha bukhulu kunokuphakama kwayo) okanye umzobo wefashoni (ububanzi bephepha bungaphantsi kobude bayo). Ubungakanani bephepha ichaza ubungakanani bephepha.
Ukutshintsha ubume bephepha kunye nobukhulu, landela la manyathelo:
Cofa i icon yoqheliso kwiqela lokuseta iphepha.
Khetha i-Portrait okanye i-Landscape.
Cofa uphawu lweSayizi kwiqela lokuseta iphepha.
Cofa ubungakanani bephepha.
Uluhlu lobungakanani luluhlu lwamaphepha onokuwasebenzisa.
Ukuprinta kwi-Excel 2019
Xa ugqibile ukuchaza indlela yokuprinta ispredishithi sakho, uya kufuna ukuyiprinta. Ukuprinta iphepha lokusebenzela, landela la manyathelo:
Cofa kwiTebhu yefayile.
Umboniso woPapasho uvela kwisahlulo esisekunene.
(Ngokuzithandela) Khetha naluphi na ukhetho, njengokutshintsha inani leekopi ukuze uprinte okanye ukhethe ubungakanani bephepha obahlukileyo okanye ulwazelelo.
Cofa i icon yokuPrinta kufutshane nomphezulu wepaneli ephakathi.
imizuzu ngemayile ukuya kwi-mph
Iintsana zetylenol idosi ngokobunzima
Inkcazo yezonyango malunga nokuzalwa
phrinta kwi-c ++
indlela yokuguqula ii-radians zibe ziidridi